Soanamad any Toamasina ; orinasa mpamokatra lafarinina miara-miasa amin’ny tantsaha | NewsMada
Soanamad any Toamasina ; orinasa mpamokatra lafarinina miara-miasa amin’ny tantsaha
Nisokatra ny volana febroary lasa teo ny orinasa vaovao Soanamad, any Toamasina, mamokatra lafarinina avy amin’ny soanambo. Tanjona ny famoronana asa sy fanampiana ny tantsaha. Misy ny kaoperativa iraisan’izy ireo mamatsy soanambo, akora fototra.
Manome soanambo hatrany amin’ny 300-400 kilao ny fototra iray amin’ny fotoam-pahamasahany, marsa hatramin’ny volana jona. Tsy misy mpihinana firy izany, very fotsiny na ataon’ny olona sakafom-biby. “Voaporofo ara-tsiansa anefa ny fisian’ny hery fiarovana betsaka ao aminy : miaro amin’ny aretim-po, diabeta, homamiadana amin’ny tsinay. 20% amin’ny angovo ilain’ny vatana, azo avy amin’ny lafarinina soanambo 100 g”, hoy ny tale jeneraly Soanamad, Randrianarisoa Kenlee Rado.
“Miaro ny tontolo iainana, ny nofon-tany ny fambolena azy io no manome fidiram-bola ho an’ny tantsaha, mitondra fanatsarana ny fari-piainan’izy ireo », hoy ihany ny tale jeneraly. Misongadina ny fahaizan’ny tanora teknisianina malagasy amin’ny fananganana io orinasa io. Izy ireo ihany no nanamboatra ny milina ampiasaina, mamokatra lafarinina 20 t isam-bolana amin’izao voalohany izao. 20 ny mpiasa ao aminy, ankoatra ireo tantsaha mpiara-miasa.
Vina ho tratrarina
Karazany roa ny lafarinina vokariny : fanaovana mofo sy mofomamy. Amin’ity volana marsa ity ny hamoaham-bokatra voalohany ho an’ny tsena any Toamasina sy eto Antananarivo. Vina ho tratrarina ny hanaparihana izany manerana ny Nosy. “Tsy mbola maika ny fanondranana any ivelany fa ny kalitao aloha no laharam-pahamehana. Ao anatin’ny dimy taona, hanangana orinasa roa fanampiny any Avaratra Atsinanana sy Atsimo Atsinanana”, hoy ihany ny tale jeneraly. Tsy mifidy toerana ny soanambo, araka ny fikarohana vita. Misy ny andrana fambolena azy izao any Ankazobe sy Moramanga.
Zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin’ny kaoperativan’ny tantsaha. Omena fiofanana izy ireo ho an’ny fenitra takina. Tsy azo anaovana lafarinina ny soanambo rehetra, samy tsy mety avokoa ny matoy sy ny manta be. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ny fiangonana FJKM manofana ireo tantsaha. Mpamatsy ny Soanamad amin’izao fotoana izao, ireo tantsaha avy amin’ny kaominina Ampasina, Ambatoharanana ary Fenoarivo Atsinanana.